Twitter သည်ကျွန်ုပ်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သစ်ဖြစ်သည် Martech Zone
စနေနေ့, မတ်လ 15, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါအခုလိုက်နေတယ် တွစ်တာပေါ်တွင် 341 ရှေးရှေး။ ငါ Twitter ကိုဆက်သွယ်ပြီး 'auto-follow' ကိုဖွင့်ခိုင်းပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကျွန်ုပ်၏နောက်သို့လိုက်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်သင့်ကိုအလိုအလျောက်လိုက်သည်။ ၎င်းသည်မှတ်တမ်းတင်ထားသောအင်္ဂါရပ်မဟုတ်သကဲ့သို့သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်တွင်လည်းမရှိပါ။ သို့သော်တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားဤအကြောင်းကိုပြောခဲ့သဖြင့်ကျွန်ုပ်က၎င်းကိုတောင်းဆိုခဲ့ပြီးတွစ်တာကိုကြင်နာစွာဖွင့်ပေးခဲ့သည်။
တွစ်တာနှင့်ပတ်သက်သည့်ဝဘ်ဆိုက်တွင်ဆွေးနွေးမှုများစွာရှိသည် သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည် မဟုတ် beaစွန့်ပစ် of အချိန်.
ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများနှင့်နည်းပညာအသစ်များသည်ဝဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်ပေါ်လာသည်နှင့်အမျှသူတို့၏အသုံးပြုမှုကိုအသွင်ပြောင်းမှုမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး၎င်းကိုတီထွင်သူများကမျှော်လင့်မထားကြပေ။ ယနေ့ငါသာတွစ်တာကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဖြစ်မည်မျှအသုံးချကြောင်းနှင့်အခြားသူများကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်မည်မျှအသုံးပြုသည်ကိုယနေ့ငါသိနားလည်ခဲ့သည်။ ငါထင်တာကတော့နောက်ဆုံးမှာတွစ်တာဟာတခြားနည်းပညာတွေထဲကအတော်လေးကိုအပိုင်းအစတစ်ခုယူနိုင်တယ်၊ ChaChaဦး နှောက်စွမ်းအင်သုံးရှာဖွေရေးယန္တရား။
ChaCha သည်အမြဲတမ်းမရရှိခဲ့ပါ အ အလှဆုံး စာနယ်ဇင်းများ - ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိစ္စအတွက်ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာငါရိုးသားစွာမသိခဲ့ဘူး။ ရှာဖွေနေသောလူသားများသည်အလွန်ထိရောက်မှုမရှိဟုထင်ရသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လျှင်၊ ရပ်ရွာမဟုတ်ပါ။
ဒါကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခုအနေနဲ့တွစ်တာရဲ့အားသာချက်ကထူးခြားတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီးပွားရေးကျွမ်းကျင်သူတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ဝိုင်းရံထားတယ်။ သူတို့နဲ့မျှဝေရတာကနေသင်ယူရတာ။ သူတို့ကိုသီးခြားလေးစားပါတယ်၊ သူတို့ကအခြားတစ်ဖက်ကလူစိမ်းမဟုတ်ဘူး။ နောက်ပြီးကျွန်တော်စလိုက်တဲ့လူ ဦး ရေပိုများလာတာနဲ့အမျှမေးခွန်းတစ်ခုတင်တဲ့အခါငါရရှိတဲ့အဖြေတွေရဲ့အရည်အသွေးနဲ့အရေအတွက်ကပိုများလာတယ်။
ငါအွန်လိုင်းဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာအကြောင်းမေးတဲ့အခါ, လူနှစ်ယောက်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခဲ့သည် Aviary ကုမ္ပဏီ။ ငါတောင်းသောအခါ Slideshare အစားထိုး (သူတို့ကနောက်ကျအများကြီးဆင်းပြီ), ငါမနည်းတုံ့ပြန်မှုတစ်ဒါဇင်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဖြေမှန်ကိုမှန်ကန်စွာရှာနိုင်ရန်အတွက်ငါမေးခွန်းတစ်ခုကိုအဖြေရှာနိုင်ခဲ့တယ်။ နှင့်အတူ တွစ်တာကျွန်ုပ်၏ရှာဖွေမှုကိုမွမ်းမံနိုင်သည်၊ ထင်မြင်ချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုအမြန်ဆုံးကျွန်ုပ်ရရှိသောရလဒ်အနည်းငယ်ကိုနှိပ်ပါ Google.
တွစ်တာမှာများများစားစားမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့မတူညီတဲ့ရှုထောင့်မျိုးနဲ့စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ Twitter သည်ကျွန်ုပ်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသစ်ဖြစ်သည်။
Tags: Search ကိုစျေးကွက်တွစ်တာtwitter ရှာဖွေခြင်း
ဗီဒီယို - တွစ်တာကိုနားလည်ခြင်း
မတ်လ 15, 2008 မှာ 11: 31 AM
ဟုတ်တယ်လူလို့မထင်ရပေမယ့်စကားလုံးတိုင်းကိုငါသဘောတူတယ်။ တွစ်တာဟာသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေရာမှာကူညီရာမှာစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတယ်။ အဲဒီမှာလူတွေလုံးဝကြောက်မက်ဘွယ်ရှိပါတယ်။
မတ်လ 15, 2008 မှာ 7: 13 pm တွင်
Doug, မင်းရဲ့ post ကိုဖတ်ပြီးနောက်ငါပဲမှတ်ပုံတင်ရန်သွား၏။ သို့သော်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်၏အသုံးပြုသူအမည်ကိုအသုံးပြုထားသဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုသည်။ တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာကတော့၊ ကျွန်ုပ်သည်နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဘယ်လိုလုပ်ရမည်၊ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်နောက်သို့လိုက်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိသေးပါ။ ကျွန်ုပ်၏အသုံးပြုသူအမည် dratanone ဖြစ်ပါတယ် ကျေးဇူးပြုပြီးနောက်လိုက်စာရင်းထဲထည့်လို့ရမလား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မတ်လ 15, 2008 မှာ 10: 47 pm တွင်
ရွှင်လန်းမှုနှင့် Twitter ပေါ်တွင်သင့်ကိုတွေ့မြင်!
မတ်လ 15, 2008 မှာ 7: 46 pm တွင်
Doug နဲ့ကျွန်မရဲ့ post post ကတကယ့်အရင်းအမြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ငါမင်းကိုအခုထည့်မယ်
မတ်လ 16, 2008 မှာ 12: 25 pm တွင်
Twitter မှတစ်ဆင့် ChaCha ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ သွားပါ http://www.twitter.com/ChaCha နှင့် twitter ကိုလိုက်နာပါ။ ထိုအခါသင်သည်မေးခွန်းတစ်ခုနှင့်တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ခ်ျ (Cha ChaCha) ပြုလုပ်ပါကသင်၏အဖြေနှင့်တိုက်ရိုက်စာကိုသင်ရရှိမည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ ၂၄၂၂၂၂ စာသားအဖြေတွေကို ၀ န်ဆောင်မှုမှာတွစ်တာထဲထည့်ပြီးပြီ။
မတ်လ 16, 2008 မှာ 2: 42 pm တွင်
ငါကျိန်းသေတူညီသောလမ်းဖြစ်၏ ... ဒီတစ်ခါလည်းလူမှုရှာဖွေရေးပြန်လည်။ Twitter သည် SEO ကိုအစားထိုးလိမ့်မည် my စမ်းသပ်ချက် - ငါ့ဘလော့ဂ်ကိုကြိုးစားစမ်းကြည့်ပါ😛
မတ်လ 17, 2008 မှာ 6: 53 AM
ဒီကနေ့ပဲငါ Twitter ကိုစသုံးတယ်။ တီးဝိုင်းတွင်အနည်းငယ်နောက်ကျသွားသော်လည်းအခြားသူများကဘာကြောင့်ဒီလောက်အသုံးဝင်တာလဲဟုကျိန်းသေသိနိုင်သည်။
မတ်လ 17, 2008 မှာ 3: 54 pm တွင်
ဒေါက်ဂလပ် - ငါလည်းကြီးမားတဲ့ twitter ပန်ကာတစ်ခုပါ။ ၎င်းသည်သင့်အားသင်စဉ်းစားနေသော (သို့) မျှဝေနေသည့်အရာ၏အနှစ်သာရဖြစ်သောအသေးအဖွဲမှတ်တမ်းများဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်သည်။ Plus အားတွစ်တာသည်ပါးနပ်သောအစောပိုင်းမွေးစားသူများနှင့် web ဝါသနာအိုးများနှင့်ပြည့်နေသည်။ အော်တိုနောက်လိုက်အကြောင်းကျွန်တော်မကြားရဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကတကယ်ကိုကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါ။ ဒီတစ်ခုဝေမျှတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်